စိတ်ညောင်းခြင်း | Khet Yint Yint
မှန်၏. အညောင်းလွန်သွားလို့သတင်းစာတောင်မဖတ်တော့ဘူး မသိရလဲ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီ။
Comment by kom — April 6, 2011 @ 6:03 am | Reply
သေချာရေးထားတဲ့စာလေးကို မဖြစ်ညစ်ကျယ်လေး လာရေးရတာ အန်မတန်အားနာပါ၏. မရေးဘဲနဲ့တောင်ပြန်သွားဦးမလို့။
Comment by kom — April 6, 2011 @ 6:04 am | Reply
လူတိုင်း လူတိုင်း စိတ်တွေ ညောင်းဖူးကြပါတယ်… ဒီတော့ စိတ်ကျောင်းထွက်ကြပြန်တယ်…
ဒီလိုပဲ ညောင်းလိုက်၊ အညောင်း အညာပြေအောင် ထွက်ကျောင်းလိုက်နဲ့ ဘဝကြီး လည်နေရတာ…
သေချာတာကတော့ မောင်လေး ခမမ… လူကြီးဖြစ်လာတယ် ဆိုတာပါပဲ…။
Comment by သက်ဝေ — April 6, 2011 @ 4:45 pm | Reply
Comment by sonata-cantata — April 7, 2011 @ 8:49 pm | Reply
Comment by nn — April 11, 2011 @ 11:27 pm | Reply
စိတ်လေး အညောင်းမပြေသေးဘူးလား….း-)
Comment by သက်ဝေ — August 20, 2013 @ 10:18 pm | Reply
Comment by arab instagram followers — September 23, 2014 @ 6:52 pm | Reply